Fiteny hebreo - Howling Pixel
Fivoaran'ny fiteny hebreo
Ny fiteny proto-hebreo
Ireo Taratasin'i Amarna na Taratasin'i Tel-Amarna dia taratasim-pifandraisana diplomatika egiptiana tamin'ny taonjato faha-13 tal. J.K. Ny sasany amin'ireo taratasy ireo dia avy any Kanana. Voasoratra amin'ny fiteny akadiana izy ireo. Hita anefa fa misy fitovizana amin'ny fiteny hebreo nanoratana ny Torah ny votoatin'izy ireo ka midika izany fa nisy fitenim-paritra proto-hebreo izay notenenina tao Kanana talohan'ny niorenan'ny vahoaka
Hebreo fonenana tao. Ireo taratasy ireo anefa dia tsy miresaka momba ny Hebreo fa ny amin'ny atao hoe Apiro izay tsy tena fantatra mazava nefa misy mampifadray azy amin'ny Hebreo.
Ankoatr'ireo zavatra momba ny fiteny ireo dia tsy fantatra mazava tsara ny tena endrik'ilay na ireo fiteny atao hoe proto-hebreo ireo. Ny azo tenenina dia izao: ireo fitenim-paritra tranain'i Fenisia (Libàna amin'izao fotoana izao) izay fantatra dia misy itovizana amin'ny fiteny hebreo tranainy ka azo atao ny milaza fa fisehon'ny fiteny iray arakaraka ny faritra itenenana azy izy ireo, izay mety notenenina tany amin'ny morontsiraka siro-palestiniana. Ny hebreo biblika dia avy amin'ireo fitenim-paritra ireo.
Tamin'ny volana Jolay 2008 tamin'ny soso-nofon-tany mifandraika amin'ny taona 1050 - 970 tal. J.K. no nahitana ny Ostracon an'i Khirbet Qeiyafa izay mety ho soratra hebreo tranainy indrindra tao amin'ny toeram-pangadiana arkeolojikan'i Khirbet Qeiyafa, tanàna kely tamin'ny Andron'ny Vy II A.
Ny fiteny hebreo biblika
Fiteny velona ilay atao hoe hebreo biblika teo anelanelan'ny taonjato faha-12 sy faha-2 tal. J.K. Mety nifanahaka amin'ny fiteny fenisiana izy tamin'izany satria mifanakaiky ireo fiteny roa ireo. Ny fiteny hebreo no nanoratana ny Baiboly hebreo (תַּנַ"ךְ / Tanakh). Toraka izany koa ireo soratanana hita tao Komràno teo anelanelan'ny taona 1947 sy 1956. Ny ankamaron’ireo boky apokrifan'ny Baiboly anefa dia tamin'ny fiteny arameana.
Ao amin’ny Baiboly, indrindra ao amin'ny boky voalohany, ny Genesisy (amin'ny teny hebreo: בְּרֵאשִׁית / Bereshit), dia ahitana ny soratra hoe אברם העברי (Abram ha-’ibri izay midika hoe "Abrama ilay Hebreo" nefa tsy milaza io lahatsoratra io fa niteny hebreo i Abrama na ny taranany. Ny teny hoe hebreo na hebrio dia mety avy amin'ny fitenenana hoe מעבר לנהר / me-’eber la-nahar ("avy eny am-pitan'ny ony"), izay manondro ny fiavian'i Abrahama. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-3 tal. J.K. dia nampiasa ny fiteny arameana ny Jiosy tao Palestina tamin'ny fiainany andavanandro sy tamin'ireo literatiora ivelan'ny fivavahana.
Fiteny ampiasanina amin'ny fivavahana izao ny hebreo biblika ka hafa fa tsy mitovy amin'izay tenenin'ny vahoaka. Tsy ampy voambolana ny fiteny hebreo biblika izay tsy ahitana afa-tsy voan-teny latsaky ny 8 000 ka ny 2 000 dia voan-teny tsy miseho ao amin'ny Baiboly hebreo afa-tsy indray mandeha monja, ary ireo teny ireo dia voaforona tamin'ny fototeny miisa 500. Ny voambolana grika tamin'izany fotoana izany anefa dia efa nahatratra 120 000 isa. Azo antoka fa nisy voambolana hafa maro kokoa nampiasain'ny vahoaka ho fanampin'izay hita ao amin'ny Tanakh nefa nanjavona izany.
Ny fiteny hebreo misnaika
Ny fiteny hebreon'ny Andro Antenantenany
Amin'ny fiainana andavanandro dia niteny ny fitenin'ny firenena nonenany ny Jiosy, ka tsy nampiasa ny fiteny hebreo afa-tsy tamin'ny sehatry ny fivavahana. Tamin'izany fiteny hebreo izany no nanatanterahan'ny Jiosy am-pielezana ny fivavahany sy amakiany ny Torah ary andinihany ireo hevi-teny isan-karazany amin'io boky masina io. Tamin'ny fiteny hebreo koa no nifandraisan'ireo Olonkendry jiosy tamin'ny firenena samihafa. Hita araka ireo zava-bokarina ara-pivavahana sy ara-kolontsaina ary amin'ny tontolon'ny asa ireo ny fivoaran'ny fiteny hebreo nandritra ny fotoana lava.
Ny fiteny hebreo vaovao dia karazan'ny fiteny hebreo izay ampiasaina na am-bava na an-tsoratra nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-19. Miavaka izy noho izy lasa fiteny velona, notenenin'ireo Sionista aloha, avy eo nampiasain'ny ankamaroan'ny Israeliana, taorian'ny taonjato maro nahafaty ny fiteny hebreo sy naha fitenim-panompoam-pivavahana fotsiny azy. Nahazo aina toy ny nateraka indray ny fiteny hebreo tamin'ny taonjato faha-20 vokatry ny asan'i Eliezer Ben Yehudah tamin'ny andron'ny atao hoe Haskala (השכלה).
Ny Abidy hebreo dia fitambarana litera miisa 22 tsy ahitana zanatsoratra izay anoratana ny fîteny hebreo. Amin’ny fiteny hebreo, io abidy io dia atao hoe אָלֶף־בֵּית עִבְרִי‬ / Alefbet Ivri na האלפבית העברי / Ha-ˈAlefbet ha-Ivri. Tsy misy ny fanavahana ny sorabaventy sy ny soramadinika. Taty aoriana vao nisy marika miendri-teboka atao hoe nikkud izay amantarana ny zanapeo. Vakina avy
ankavana miankavia ny soratra hebreo.
Ny abidy samaritana dia abidy ampiasain'ny Samaritana hanoratany ny fiteny hebreo samaritana (izay atao hoe fiteny hebreo samaritana) ary ny fiteny arabo. Ny abidy samaritana, raha ny marina, dia abjady, izany hoe abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra ary tsy anoratana afa-tsy ny renifeo, sahala amin'ireo abidy hafa ampiasaina hanoratana ny fiteny semitika. Ahitana tarehin-tsoratra (litera) miisa 22 ao amin'io abidy io, ka ny tarehin-tsoratra tsirairay afaka atao tarehimarika koa. Avy ankavanana miankavia ny fanoratana. Ny abidy samaritana dia karazan'ny abidy hebreo tranainy, izay avy amin'ny abidy fenisiana. Io abidy hebreo tranainy io dia efa navelan'ny Jiosy ka tsy nampiasainy nanomboka tamin'ny tenantenan'ny taonarivo voalohany tal. J.K. ary nosoloany ny abidy hebreo ampiasaiana amin'izao fotoana izao, nefa ny Samaritana nitahiry azy.
Ny Bokin'i Daniela na Bokin'i Daniely dia boky hita ao amin’ny Baiboly hebreo sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Amin’ny voalohany ny boky dia mitantara ny amin’ny zatovolahy hebreo efatra izay samy avy ao amin’ny fanjakan’i Joda, indrindra fa i Daniela (na Daniely), izay lasa babo avy tany Jerosalema ka nasesitany tany Babilonia tamin’ny taona 606 tal. J. K. Lasa mpiasam-panjakana tao Babilona i Daniela sy ireo namany telo rehefa hitan’ny mpanjaka ny fahendreny. Tsy nivadika tamin’ny finoana an’ Andriamanitra anefa izy ireo na dia teo ny fanerena samihafa nahazo azy mba hanompo sampy ary na saika ho namoizany ny ainy aza izany. Resin’ireo Mediana sy Persiana ny Babiloniana nefa nanohy ny asany tao amin’ny fanjakana ihany i Daniela.
Amin’ny tapany faharoa ny boky dia mitantara ny fahitana maro izay nasehon’Andriamanitra an’i Daniela sy ny hevitr’ireo fahitana ireo araka ny nambaran’ny anjely taminy.
Sady bokin-tantara no bokim-paminaniana ny Bokin’i Daniela. Ny boky manontolo dia maneho ny fifehezan’Andriamanitra ny tantaran’ny zanak’olombelona sy izao tontolo izao.
Ny Bokin'ny Ekleziastika na Fahendren'i Bena Siràka dia boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly katolika sy ortodoksa izay voasokajy ho isan'ireo bokim-pahendrena. Ny lohahevi-dehiben'ny boky dia ny Fahendrena izay anaovan'ny mpanoratra fitanisana ohabolana sy famelabelarana voalamina. Ny fatahorana an'Andriamanitra no fisehoan'izany Fahendrena izany. Izany dia nataon'ny mpanoratra mba hanoherany ny fihanaky ny kokontsaina grika (indrindra ny filozofia) izay mila hanototra ny kolontsaina sy ny fivavahana jiosy nolovana tamin'ireo razana. Ny Fahendrena dia sady reny no vady no anabavy ka ny fikatsahana azy dia fikatsahana an'Andriamanitra ary ny fiainana miaraka aminy dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra.
I Jesoa zanak'i Siràka (hebreo: Yeshua ben Sira) no hoe nanoratra an'io boky io tamin'ny fiteny hebreo. Ny zafikeliny no nandika an'ilay boky ho amin'ny fiteny grika.
Ny Jiosy ny ny Protestanta dia tsy manao an'io boky io ho filamatry ny finoana (kanonika) fa mihevitra azy ho tsara vakina ihany.
Ny fanampin'ny Bokin'i Daniela na fanampin'ny Bokin'i Daniely dia soratra fanampiny hita ao amin'ny Bokin'i Daniely ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Ity tovana ity, izay tsy voasoratra tamin’ny fiteny hebreo na arameana fa tamin’ny fiteny grika, dia tsy noraisin’ny Protestanta sy ny Jiosy any Palestina ho kanonika ao amin’ny Baiboliny.
Ny fanehoanj-avatra efa sy ny fanehoan-javatra efa dia fanehoan-javatra mampifanohitra asa na toetra nitsahatra amin'ny asa na toetra tsy mitsahatra.
Ny fiteny amorita na fiteny amoreana dia fiteny semitika notenenin'ny vahoaka amorita izay nonina tao Siria, tao Mesopotamia Ambony sy Ambany teo anelanelan'ny fiafaran'ny taonarivo faha-3 tal. J.K. sy ny foantombohan'ny taonarivo faha-2 tal. J.K. Somary ntaolontaolo kokoa ny fiteny amorita raha heverina ny fomba fanononan-javatra izay manakaiky ny an'ny fiteny akadiana. Ny fifanahafan'ny voambolany amin'ny an'ny fiteny hebreo sy ny fiteny arameana na ny fiteny ogaritika no iantsoana ny fiteny amorita ho fiteny kananita (na kananeana).
Ny fiteny fenisiana na fiteny foinikiana na fiteny foenikiana dia fiteny avy ao amin'ny morontsirak'i Libàna, ao amin'ny faritra atao hoe "tanin'i Kanaana" na "tany Kanana" (araka ny fiantsoan'ny Fenisiana sy ny Arabo sy ny Hebreo ary ny Arameana), na Fenisia na Foinikia na Foenikia (araka ny fiantsoan'ny Grika sy ny Romana), na Pūt amin'ny fiteny egiptiana taloha. Ny fiteny fenisiana dia fiteny semitika ao amin'ny zana-bondron'ny fiteny kananeana, dia vondrona ipoiran'ny fiteny hebreo. Ny fiteny fenisiana dia notenenina tao Libàna, tamin'ny morontsirak'i Siria, tao Palestina, tao amin'ny tapany avaratr'i Israely ankehitriny, ary tao amin'ny ampahan'ny nosy Kiprosy (ka nifanakaiky amin'ny fiteny grika izy tao). Niteny fenisiana koa ny faritra sasany tany Anatolia (Azia Minora) noho izy fiteny manan-kaja. Niteny fenisiana koa ny faritra voakasiky ny fanjanahan-tany fenisiana: ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Mediteranea, ary indrindra ny tao Tonizia ankehitriny, ny tao Marôka, ny tao Malta, ny faritra andrefan'i Sisilia, ny ao Sardinia, ny tao Korsa, ny tao amin'ny Andrin'i Heraklesy.
Ny fiteny fenisiana dia nosoratana tamin'ny abidy fenisiana. Ny fiteny fenisiana dia fantatra noho ireo soratra vitsivitsy, noho ny fitenenana raikitra momba ny fivavahana na ny fitantanan-draharaham-panjakana, sy noho ny rakibolana tsotra amin'ny teny roa nataon'ny mpanoratra grika na latina.
Ny fiteny hebreo samaritana dia karazana fiteny hebreon'ny Baiboly izay mbola ampiasaina sy soratan'ny Samaritana. Ankehitriny io fiteny io dia lasa fiteny ampiasaina amin'ny fotoam-pivavahana (fiteny litorjika) ka tsy ampiasaina hifaneraserana andavanandro. Miteny hebreo vaovao ny Samaritana monina ao Holon fa ny ao Nablosa kosa dia miteny arabo palestiniana. Soratana amin'ny karazana abidy fenisiana, izay abidy tranain'ny fiteny hebreo tranainy izay navelan'ny Jiosy ka tsy nampiasainy intsony hatry ny Andro Taloha, ny fiteny hebreo samaritana.
Ny fiteny semitika afovoany dia sampan'ny fiteny semitika tenenina ao ao afovoan'i Azia Andrefana, izay ahitana ny fiteny hebreo, ny fiteny ogaritika, ny fiteny moabita, ny fiteny fenisiana, ny fiteny arameana (isany ny fiteny siriaka), ny fiteny arabo sy ny fitenim-paritra avy aminy ary ny fiteny maltey.
Ny fiteny semitika andrefana dia sampan'ny fiteny semitika hita amin'ny tapany andrefan'ny faritr'i Azia Andrefana. Ireto avy ireo fiteny semitika andrefana: ny fiteny amorita (na amoreana), ny fiteny ogaritika, ireo fiteny tao Kanàna (dia ny fiteny fenisiana, ny fiteny ponika, ny fiteny hebreo, ny fiteny amonita, ny fiteny moabita, ny fiteny edomita), ny fiteny arameana, ny fiteny arabo, sy ireo fiteny ao atsimon'i Arabia, ary ireo fiteny semitikan'i Etiopia sy Eritrea.
Ny fiteny semitika avaratra-andrefana dia sampana jeografikan'ny fiteny semitika izay hita any avaratra andrefan'ny amin'ny faritr'i Azia Andrefana, izay sampan'ny fiteny semitika andrefana. Ny fiteny semitika avaratra-andrefana dia manisy tovona rehefa hanao anarana milaza maro.
Ireto avy ireo fiteny semitika avaratra-andrefana: ny fiteny amorita (na amoreana), ny fiteny ogaritika, ireo fiteny tao Kanàna (dia ny fiteny fenisiana, ny fiteny ponika, ny fiteny hebreo, ny fiteny amonita, ny fiteny moabita, ny fiteny edomita) ary ny fiteny arameana.